Accueil > Gazetin'ny nosy > Coronavirus : Miantso vonjy ireo Mpianatra malagasy any Indonezia
Coronavirus : Miantso vonjy ireo Mpianatra malagasy any Indonezia
Miaina anaty tebiteby ireo mpianatra malagasy any Indonezia manoloana ny toe-draharaha izay mifamahofaho maneran-tany ary anisan’ny voakasik’izany i Madagasikara sy Indonezia momba ny valan’aretina coronavirus.
Miantso vonjy ireto mpianatra malagasy any Indonezia ireto noho ny tsy mbola naharaisan’izy ireo ny “allocation financière 2018-2019”, izay vola tokony nivoaka tamin’ny Desambra 2019 kanefa « tsy mbola tonga aty noho ny antony izay mbola tsy mazava », hoy ny fitarainan’ireto mpianatra ireto.
Efa nisy, hoy izy ireo, ny fitarainana maro, sy fitadiavam-bahaolana naroso tamin’ny tompon’andraikitra, toy ny CONABEX (Commission Nationale des Bourses Extérieures) sy ny Ministera isan’ambaratongany, saingy nandamòka daholo izay natao rehetra.
Maro amin’ny mpianatra malagasy any Indonezia no mianto-tena. Hany ka io vola fanampiana avy amin’ny fanjakàna io, izay indray mandeha isan-taona ihany, no mba antenain’izy ireo, ary ny Ray aman-drenin’izy ireo dia maro no anatin’ ny fahasahiranana, ka izay no iantsoan’ireto Mpianatra malagasy ireto vonjy.
Trangana Coronavirus : Miisa 50 ireo mitondra ny valan’aretina
Hetsi-bahoaka 1971 : 49 taona katroka anio
Kolo anaka : NY TSARA HO FANTATRA MOMBA NY ANDROBE (Fizarana 7)
Fiarovana amin’ny Covid-19 : Tsy hiadian-kevitra ny fihibohana an-trano
Coronavirus : Manomboka misy maty aty amin’ny Ranomasimbe Indiana
INTY SY N’NDAY : Aza manaiky pempoin’ny sasany !
Fampanajana ny fihibohana : Aza variana amin’ny lalambe migodana re !
Lalana eto Antananarivo : Manomboka ny tetik’asa fikojakojana
Covid-19 aty Afrika : Mampivarahontsana ny tenin’ny sekretera jeneralin’ny ONU
Faritra DIANA : Tra-pahasahiranana koa ireo mpanjono